Didy lehibe ho an'i Ryanair, Wizz Air, EasyJet, sazy Volotea ho an'ireo mpandeha sy kilema marary
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Didy lehibe ho an'i Ryanair, Wizz Air, EasyJet, sazy Volotea ho an'ireo mpandeha sy kilema marary
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Vaovao isan-karazany
Mandoa onitra ny Fahefana Aviation
Rehefa avy nametraka lamandy 35,000 euro tamin'i Ryanair, Wizz Air, easyJet, ary Volotea, ireo zotram-piaramanidina ireo dia hijanona amin'ny fiambenana tsy miovaova ataon'ny Italianina Aviation Authority (ENAC).
Araka ny ENAC, ireo zotram-piaramanidina lafo vidy ireo dia manohy mandoa vola fanampiny ho an'ireo mandeha miaraka amin'ny ankizy na sembana.
Nisy ny fepetra vonjy taitra nanomboka ny 15 aogositra 2021, nanakana ny fiampangana fanampiny ho an'ny seza hiaraka.
Namaly avy hatrany i EasyJet ary nilaza fa tsy mitombina ilay fiampangana sy fandoavana lamandy.
Ny zotram-piaramanidina lafo vidy, hoy ny ENAC, dia meloka noho ny “fanohizany hatrany amin'ny famatsiam-bola ho an'ny fizarana seza akaikin'ny mpikarakara zaza tsy ampy taona sy ny sembana.”
"Tamin'ny fizahana voalohany natao," ENAC dia nanamarika fa ireo orinasa ireo dia “tsy nahomby: mbola tsy, araka ny voatondro sy nohamafisin'ny mpitsara mpitantana, no nanova ny informatika sy ny rafitra fiasan'izy ireo, ary tamin'ny fotoana nanaovana famandrihana dia mbola nangataka fanampiana ho an'ny vidin'ny tapakilan-drivotra ho an'ny ny fanendrena seza akaikin'ny mpikarakara zaza tsy ampy taona sy sembana, afa-tsy, raha ilaina, ny famerenam-bola. ”
Noho io antony io dia "nanomboka ny fomba hametrahana sazy" amin'ireo mpitondra entana 3 ny Manampahefana. Ny onitra - araka ny notaterin'i Corriere della Sera - dia "mifanentana amin'ny tsy fahatanterahana" ary "afaka manomboka amin'ny 10,000 euro farafahakeliny hatramin'ny 50,000 XNUMX farafahakeliny isaky ny fifanolanana tokana."
Ny fizarana seza maimaimpoana ho an'ny zaza tsy ampy taona sy ireo olona mihena ny fivezivezena manakaiky ny ray aman-dreniny sy / na ny mpikarakara azy ireo dia azo antoka amin'ny fepetra vonjy maika navoakan'ny ENAC ary efa manan-kery nanomboka ny 15 aogositra 2021.
EasyJet avy hatrany dia namaly tamina fanambarana iray, nanamafy fa "nanatanteraka ny fanajana feno ny lalàna manan-kery ary ny fanombohana ny fomba fampiharana ny sazy dia tsy mitombina tanteraka."
Notsiahivin'ilay orinasa fa "manome toerana ho an'ny fianakaviana miaraka izy ireo, izay midika fa ny zaza latsaky ny 12 taona sy ny olona mihena ny fivezivezena dia mipetraka eo akaikin'ny olon-dehibe miaraka aminy nefa tsy andoavany vola."
Ny fahefana dia nametraka ny fanafoanana ny sondro-bidin'ireo mpandeha ireo ny 17 Jolay 2021. Avy eo ny TAR dia nanemotra ny fidiran'ny fepetra hatramin'ny aogositra 15. olona tsy ampy taona na kilemaina miaraka amin'izy ireo dia mbola ampangaina amin'ny famenony.